डिजाइरीको छोरो (कथा)
केट चोपेँको जन्म सन् १८५१ मा सेन्ट लुईमा भएको थियो । उनी चार वर्षकी हुँदा उनका बुवाको निधन भयो र उनी मावलमा हुर्किइन । १८७० मा उनले एकजना कपास व्यापारीसँग विवाह गरिन् । १ ८८२ मा उनको पनि निधन भएपछि ६ जना छोराछोरीको पालन–पोषणको अभिभारा उनका काँधमा आइपर्‍यो । उनी जीविकोपार्जनका लागि लेखनतिर लागिन् । सन् १८९० मा “भूलमा” नामक उपन्यास प्रकाशित भयो । सेन्च्युरी र हार्पर जस्ता पत्रपत्रिकाहरूमा उनका कथाहरू छापि न थाले । १८९४ र १८९९ मा दुईवटा कथास ङ्ग्रहहरू प्रकाशित भए । “दि अवेकनिङ्” अर्थात् जागरण नामक उपनयास उनको सर्वश्रेष्ठ रचना हो ।
चोपिनको साहित्यको विशेषता भन्नु पर्दा उनी पुरुषसँगको यौन सम्बन्धमा महिलाका विचार, भावना र अनुभूतिहरूलाई निर्वाध रूपले व्यक्त गर्ने नारीवादी श्रष्टा हुन् । रङ्गभेदले जन्माएको विसङ्गति उनको लेखको अर्को आयाम हो । प्रस्तुत कथा रङ्भेदले निर्माण गरेको पारिवारिक विघटनको विषयमा लेखिएको एक उत्कृष्ट कथा हो ।
दिन निकै रमाइलो भएकोले मेडम भाल्मोन्ड आफ्नो गाडीमा चढेर डिजाइरी र उनको नवजात छोरालाई भेट्न लाब्रीतिर लागिन् । डिजाइरीलाई बच्चासहित सम्झँदा उनलाई हल्का हाँसो पनि लागेर आयो । हिजोमात्रै जस्तो लाग्थ्यो— डिजाइरी आफैँ सानी बच्चीभन्दा थोरै ठूलीमात्रै देखिन्थी, जब उनका श्रीमान्ले आफ्नो प्रवेशद्वारबाट गाडी हाँक्दैगर्दा कुनै ठूलो ढुङ्गाको पिल्लरको छायामा सुतिरहेको भेट्टाएका थिए डिजाइरीलार्य । पछि, त्यो सानी बच्ची उनकै काखमा ब्यूँझिई र “दादा” खोज्दै रुन थाली । उसले गर्न वा बोल्न सक्ने त्यति नै मात्र थियो । कतिपयले भने ऊ आफैँ त्यस्तो ठाउँमा अल्मलिन पुगेकी हुन सक्ने पनि बताए, किनकि ऊ टुटुक टुटुक हिँड्ने सक्ने उमेरकी थिई । तर धेरैजसो मानिसहरू सोच्थे— टेक्ससका मानिसहरूले जानीजानी उसलाई त्यहाँ छोडेका हुन्, जब साँझपख कपडाले छोपिएका उनीहरूको मालगाडी बगानको तल्लो भागनिर कोटोन माइसले छोडेको डुङ्गाको छेउबाट गज्रियो । हालका लागि मेडम भाल्मोन्डले यस्तो सबै अनुमानहरूलाई खारेज गरेकी थिइन् । उनको एउटा विश्वास भने कायम थियो — दयालु भगवान्ले उनलाई सन्तान नभएकी देखेर डिजाइरीलाई उनकी प्यारी छोरी बन्न पठाएका थिए ।
केटी एक सुन्दर, सुशील, प्यारी र इमान्दार बनेर हुर्किई — भाल्मोन्डकै नमुनाजस्ती । यो कुनै आश्चर्यको कुरा भएन जब एक दिन, आफू अठार वर्षअगाडि भेटिएको ठाउँमा रहेको ढुङ्गाको पिल्लरको छायामा ऊ पुनः उभिएकी थिई, र उसलाई देखेर त्यही बाटो गाडीमा आउँदैगरेका अर्मन्ड औबिग्नी उनको प्रेममा पर्‍यो । पिस्तोलको गोलीले लागेजस्तो यस्तै यस्तै तरिकाले त हो औबिग्नीहरू प्रेममा पर्ने गरेको ।
आश्चर्यको कुरा त के थियो भने उसले डिजाइरीलाई यसअघि कहिल्यै पनि प्रेम गरेका थिएन । उसलाई आफ्नी आमाको मृत्युपछि उसका पिताले आठ वर्षकै उमेरमा पेरिसबाट यहाँ ल्याएकै बेलादेखि उनी डिराइरीलाई जान्दथ्यो । तर त्यसदिन प्रवेशद्वारमै डिजाइरीलाई देख्दा ऊभित्र उठेको भावको आवेग हिमपहिरोजस्तो फैलियो, गौचरनमा लागेको आगोजस्तो अथवा अगाडिका सबै बाधालाई परास्त गरेर कुद्ने कुनै आँधीजस्तो । तर श्रमान् भोल्मोन्ड भने व्यवाहारिक बन्दै यो परिस्थितिको सही आकलन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए विशेष गरी केटीको अज्ञात उद्भवका सम्भन्धमा । तर अर्मन्डले भने डिजाइरीका आँखामा हेर्‍यो, र अन्य कुराको वेवास्ता गरिदियो । यसलाई भनियो — केटीको कुनै नाम छैन । नाम नभएर के भयो, जब ऊ लुइजियानाको एउटा सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित परिवारको नाम दिन राजी थियो?
केही दिनमै उसले पेरिसबाट पुष्पगुच्छ र फलफूल मगायो । ती आइपुगुञ्जेल आफूलाई धैर्यवान् बनाएर राख्यो, र जब आइपुगे, उनीहरूको बिहे भयो ।
मेडम भोल्मोन्डले डिजाइरी र उसको छोरालाई नदेखेको पनि चार हप्ता भइसकेको थियो । जब उनी लाब्री पुगिन्, देख्नेबित्तिकै, सधैँ झैँ छक्क परिन् । ठाउँ नै ठिटलाग्दो थियो, जसमा वर्षौंदेखि कुनै महिलाको उपस्थिति नरहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । बूढा औबिग्नीको बिहे पनि फ्रान्समै भएको र श्रीमती बितेपछि उनको शवलाई गाडेको पनि फ्रानसमै, किनकि जमिनप्रति उनको अगाध प्रेम थियो र उनमा त्यसलाई छोड्ने चाहना कहिल्यै पनि थिएन । पहेँलो प्लास्टरको घर, भिरालो र कालो छानोको छपनी, अलि बाहिरसम्म आएर कोठाचोटा छोपेको । यसको छेउमा सालका ठूला र शान्त रुख देखिन्थे, र तिनका बाक्ला पात र परपरसम्म फैलिएका हाँगाले घरलाई त्रिपालले झैँ ढाकेर छायामा पारेका थिए । जवान औबिग्नीको नियम भने कडा थियो । यति कडा नियममा रहेका उसका अन्य निग्रो सहयोगीहरूले मानौँ उनका बबुका पालामाजस्तो सहज र मनमौजी भएर खुसी हुनै बिर्सिसकेको थिए ।
सुत्केरी डिजाइरी भने बिस्तारै तन्दुरुस्त हुँदै थिई । कोमल, सफेद रेशम र कपालसका लुगा ओछ्याइएको खाटमा ढल्केकी थिई । बच्चो उसैसँगै थियो, छातीमा निदाइरहेको । एकजना पहेँलो अनुहारकी सेविका नजिकैको झ्यालनेर बसेर आफैँलाई हम्का लगाइरहेकी थिई ।
मेडम भाल्मोन्डले आफ्नो कुप्रो परेको शरीर डिजाइरीतिर झुकाइन् र प्रेमले अँगालो हाँल्दै चुम्बन गरिदिइन् । अनि बच्चातिर फर्केर विष्यमयका साथ भनिन्, “यो बच्चो त तेरो होइन त ।”
त्यसताका भाल्मोन्डको परिवारमा बोलिने भाषा फ्रान्सेली थियो ।
डिजाइरीले हाँसेर भनी, “ऊ हुर्केको देखेर तपार्इं चकित पर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो । सानो घोर्ले सुँगुर, होइन त? उसका हात हेर्नू त आमा । हात र औँला पनि हेर्नू त — साँच्चैका नङ छन् । जेन्ड्रिनले आज बिहानमात्रै काटिदिएकी । हो कि होइन, जेन्ड्रिन?”
त्यस महिलाले कपडाले ढाकेको टाउको झुकाई र भनी, “हो नि, मेम ।”
फेरि डिजाइरीले थपी, “कस्तरी रुन्छ ! कानै खाने गरी । अस्ति अर्मन्डले पर, ब्लान्चेको घरबाटै सुनेको अरे ।”
यसैबीच मेडम भाल्मोन्डले आफ्ना आँखा त्यस बालकको अनुहारबाट एक निमेष पनि हटाएकी थिइनन् । उनले बच्चो उठाइन् र साथमा लिएर नजिकै, सबैभन्दा उज्यालो झ्यालतिर गइन्, र ध्यानपूर्वक हेरिन् । केही सोधेजस्तो गरेर जेन्ड्रिनतिर फर्किइन् । तर जेन्ड्रिनका आँखा परका खेतहरूमा केन्द्रित थिए ।
मेडम भाल्मोन्डले भनिन्, “हो त । बढ्यो पनि, र फेरियो पनि ।” यति भनेर बालकलाई बिस्तारै उसकी आमाको छेउमा राखिदिइन् । अनि सोधिन्, “अर्मन्ड के भन्छ?”
डिजाइरीको अनुहार भने खुसीको एक प्रकारको आभाले धपक्कै उज्यालियो ।
“के भन्नु? मलाई लाग्छ, यस भेगमा अर्मान्ड सबैभन्दा गौरवशाली बाबु हो, किनकि बच्चो पनि छोरो पर्‍यो — उसको परिवारको नाम राख्ने । भन्नलाई छोरी नै भए पनि उत्तिनै माया गर्थें भन्छ । तर मलाई थाहा छ, त्यो होइन । मलाई खुसी पार्नका लागि मात्रै त्यसो भनेको हो । अनि आमा,” उसले अगाडि थपी र मेडम भाल्मोन्डको ध्यान आफूतिर तान्दै, साउतीको शैलीमा भनी, “यो बच्चो जन्मेपछि त उसले यी कसैलाई एक शब्द गाली गरेको छैन । यहाँसम्म कि आराम गर्न पाइन्छ भनेर खुट्टो भाँचिएको स्वाङ पार्ने नेग्रिलोनलाई पनि । हाँस्यो मात्रै र भन्यो— छुच्छो नग्रिलोनले पनि हँसाउँछ । आमा, म धेरै खुसी छु । यति खुसी कि...आफैँ डराउँछु पनि ।”
डिजाइरीले जे भनी, त्यो सत्य थियो । उसको बिहे र पछि बालकको जन्मले अर्मन्ड औबिग्नीको घमण्डी र हठी स्वभावमा परिवर्तन ल्याएको थियो । यसै कुरामा सोझी डिजाइरी ज्यादै खुसी थिई । ऊ आफ्नो लोग्नेलाई ज्यादै माया गर्थी । ऊ रिसाएको बेला थुर्थुरी हुन्थी, तर माया भने धेरै नै गर्थी । ऊ मुस्कुराएको बेला भगवान्सँग यो भन्दा अर्को कुनै आशीर्वाद चाहिँदैन भन्थी । र डिजाइरीसँगको प्रेममा परेकै दिनदेखि अर्मन्डको श्यामल, सुन्दर अनुहारमा आक्रोश देखिन छोडेको थियो ।
बच्चौ करिब तीन महिनाको भएपछि डिजाइरीलाई वातावरणमा आफ्नो शान्ति भङ्ग गर्ने केही छ भन्ने कुराको बोध भयो । सुरुमा त्यो के हो भनेर बुझ्नै कठिन भयो उसलाई ।
यो एउटा निराशाजनक सङ्केत थियो — कालाहरूका बीच विद्यमान एउटा आश्चर्यको सङ्केत, कुनै पूर्वसूचनाबिनै अलि टाढाका आफन्त एक्कासि आएजस्तो अप्रत्याशित । यो उसका श्रीमान्मा आएको अनौठो तर भयावह परिवर्तन थियो, जसबारे कुनै स्पष्टीकरण सोध्न ऊ असमर्थ थिई ।
अर्मन्ड जब डिजाइरीसँग कुरा गथ्र्यो, आँखा टेढा पारेर बोल्थ्यो, र तिनमा पहिले पहिले देखिने प्रेम गायब भएजस्तो देखिन्थ्यो । ऊ अक्सर घरमा अनुपस्थित रहन्थ्यो, र घरै आए पनि अकारण डिजाइरी र छोराको उपस्थितिबाट आफैँलाई टाढा राख्ने गर्न थालेको थियो । उता नौकरहरूसँगको व्यवहारमा पनि ऊमाथि सैतान सवार भएजस्तो देखिन थालेको थियो ।
डिजाइरी अपार पीडाले मर्णान्त थिई । एकदिन अपराह्न आफ्नै कोठामा ऊ नाइटी लगाएर बसेकी थिई र हातले आफ्नो काँधसम्म लर्किएको लामो, मुलायम खैरो कपाल सुम्सुम्याइरहेकी थिई । उसको अर्धनग्न छोरो भने साटनले आधा ढाकेको छत भएको, ठूलो, विलासी सिंहासनजस्तो लाग्ने महोगनी काठको ओछयानमा लडिरहेको थियो । ब्लाँचेकै, कालो वर्णको अर्को एउटा अर्धनग्न बालक भने मयुरको प्वाँँखको हम्को हातमा लिएर बालकको छेउमा बसी हम्का लगाइरहेको थियो । डिजाइरीका भावशून्य र उदास आँखा भने बालकमै केन्द्रित थिए । जबकि, ऊ आफूभने आफूलाई छोप्न लागेजस्तो भयावह तुवाँलोे चिर्ने कोसिसमा देखिन्थी । उसले आफ्नो छोरालाई हेरी, फेरि उसको छेउको अर्को बालकलाई हेरी र पुनः फेरि आफ्नै बालकलाई हेरी । यही प्रक्रिया जारी रह्यो ।
“ओहो !” यो उसका ओठबाट अनायासै निस्केको आवाज थियो, जसलाई उसले रोक्न सकिनँ । यस्तो आवाज निस्कियो भन्ने हेक्का पनि उसलाई भएन । उसका नलीहरूमा रगत बरफझैँ चिसियो, र उसको अनुहाभरि चिसो आद्रता फैलियो ।
उसले अर्को सानो कालो बालकसँग कुरा गर्न खोजी । सुरुमा उसको मुखबाट आवाजै निस्केन । बालकले, आफ्नो नाम बोलाइएको सुनेपछि पुलुक्क हेर्‍यो । उसकी मालिक्नी उसलाई ढोकातिर जान इशारा गरिरहेकी थिई । यसले हातमा रखेको ठूलो, नरम पङ्खा एकातिर राख्यो र बिस्तारै ढोकातिर गयो, र खाली खुट्टा चिल्लो भुइँमा टेक्दै बाहिरियो । डिजाइरी आफूभने निश्चल बनेर बसिरही । उसको दृष्टि उसको बालकमाथि केन्द्रित थियो, र उसको अनुहारमा भयको भाव देखिन्थ्यो ।
यसैबेला, उसको लोग्ने कोठाभित्र पस्यो, र उसलाई देख्दै नदेखी सरासर कोठामा भएको टेबलतिर गएर त्यहाँ राखिएका कागजका बीच केही खोज्न थाल्यो । डिजाइरीले उसलाई बोलाउँदै भनी, “अर्मन्ड,” ।
उसको आवाज यति चर्को थियो कि ऊ समान्य मान्छे हुँदोहो त उसलाई छिनालिसकेको हुने थियो । तर यसले वास्तै गरेन ।
डिजाइरीले फेरि बोलाई, “अर्मान्ड !” यसपालि भने ऊ उठेर अर्मन्डको नजिक गई र उसलाई च्याप्पै समातेर स्याँस्या गर्दै भनी, “अर्मन्ड, हाम्रो बच्चालाई हेर । यो सब के हो? मलाई बताऊ ।” अर्मन्डले बिस्तारै, तर आक्रोशका साथ आफ्नो हात उसको हातबाट छुटायो र आफ्नो समिपबाट पर हुत्याइदियो ।
डिजाइरीले फेरि चिच्याउँदै भनी, “भन । यो सब के हो?”
उसले हल्कासँग लिँदै जवाफमा भन्यो, “यसको अर्थ हो— बालक श्वेत छैन । अर्थात्, तिमी श्वोत होेइनौ ।”
यस गम्भीर आरोपको आशयलाई झटपट बुझेकी डिजाइरी भित्रैबाट स्तब्ध भई । तर उसलाई यस कुराको तत्काल खण्डन गर्ने साहस जुट्यो, र भनी, “त्यो झुट हो । यो सत्य होइन । म श्वेत हुँ । मेरो कपाल हेर । यो खैरो छ । हेर, मेरा आँखा कैला छन । अर्मान्ड, तिमीलाई पनि त थाह छ यी कैला छन् । र मेरो त्वचा गोरो छ ।”
अर्मान्डको नाडी समाउँदै फेरि भनी, “मेरा हात हेर । तिम्राभन्दा सेता छन्, अर्मान्ड!” र अट्टहासपूर्ण तरिकाले हाँसी ।
“हो, ब्लान्चेजत्तिकै सेता ।” उसले क्रूरतापूर्ण जवाफ फर्कायो र डिजाइरीलाई बालकसँग त्यहीँ छोडेर बाहिरियो ।
जब उसले कलम भेट्टाई डिजाइरीले आमा भाल्मोन्डलाई एउटा नैराश्यपूर्ण चिठी लेखी— “आमा, यिनीहरू मलाई श्वेत होइनस् भन्छन् । अर्मन्डले पनि मलाई श्वेत होइनस् भन्यो । आमा, भगवान् भाकेर भन्नुस् — यो सत्य होइन नि, है? तपाईंलाई त पक्कै थाहा छ यो सत्य होइन भनेर । म मर्छु आमा, म मर्छु । म यति दुःखी भएर बाँचिरहन सक्दिनँ ।”
उताबाट जुन जवाफ आयो, त्यो संक्षिप्त थियो— “मेरी छोरी, तिमी घर आऊ — भाल्मोन्ड । तिमीलाई माया गर्ने आफ्नै आमाकहाँ आऊ । बच्चा पनि लिएरै आऊ ।”
चिठी हात पर्नासाथ डिजाइरी, त्यसलाई लिएर उसको श्रीमान्को अध्ययनकक्षमा पुगी र ऊ बसेको मेचको अगाडिको टेबलमा खोलेर राखिदिई । ऊ आफू भने ढुङ्गाको मूर्तीजस्ती भएकी थिई —निःशब्द, गोरी, निश्चल ।
निःशब्दतामै अर्मन्डले आफ्ना भावहीन आँखा त्यस चिठीमा लेखिएका शब्दमाथि दौडायो, तर केही पनि भनेन ।
“अर्मन्ड, म जाऊँ?” डिजाइरीले तीक्ष्ण र कहरपूर्ण कौतुहलले भरिएको आवाजमा भनी ।
“हुन्छ, जाऊ ।”
“तिमी जाओस् भन्ने चाहन्छौ?”
“हो, जाऊ भन्ने नै चाहन्छु ।”
उसले सोच्यो — सर्वशक्तिमान ईश्वरले उसमाथि ज्यादती र अन्याय गरेका छन् । लाग्यो, यसरी उसकी श्रीमतीको आत्ममाथि प्रहार गरेर ऊ ईश्वसँगै बदला लिइरहेछ त्यस बखत । ऊभित्र अब डिजाइरीका लागि कुनै प्रेम बाँकी थिएन, किनकि उसले उसको घर र नाममा अप्रत्यासित घाउ निम्त्याएकी थिई ।
डिजाइरी भने कुनै तीव्र प्रहार छल्न पन्छिएजस्तो ढोकातिर पन्छिई, र उसले बोलाउँछ कि भन्ने आशा राख्दै अगाडि बढी ।
“बिदा पाऊँ, अर्मन्ड,” यसले वेदनापूर्ण स्वरमा भनी । तर अर्मन्डसले कुनै जवाफ दिएन ।
नियतिमाथि यो नै अर्मान्डको अन्तिम प्रहार थियो । डिजाइरी बच्चाको खोजीमा अन्यत्रै गई । बाहिर, शीतल कोशीमा जेन्ड्रिन डिजाइरीको बच्चालाई हिँडाइरहेकी थिई । डिजाइरीले कुनै कारण नखुलाई सेविकाको हातबाट बच्चो लिई र भर्‍याङ ओर्लिएर पर पर जान थाली, सालका हरिया हाँगामुन्तिर ।
अक्टूबरको अपराह्न — घाम अस्ताउनै लागेका थिए । पर, शान्त खेतहरूमा निग्रोहरू कपास टिपिरहेका थिए । डिजाइरीले आफूले लगाएको पतलो सेतो लुगा वा चप्पल, केही पनि फेरिन ।
उसको कपालमाथि कुनै घुम्टो थिएन, र उसका खैरा केशराशीमाथि परेका घामका किरणहरूले एउटा स्वर्णीम चकम दिइरहेका थिए । उसले पर, भाल्मोन्डको बगानतिर जाने, सबैले हिँड्नेगरेको चौडा सडक समातिन । बरू खासै नहिँडिने बाटो समानी, जहाँ काँडाहरूले जुत्ताको पातलो सोल छेडेर उसका कलिला पाउ घोचे, र उसले लगाएको पातलो लुगा च्यातेर धुजा धुजा परिदिए ।
ऊ झाडी र विलोका झ्याङभित्र हराई। जुन ऊ हिँडिरहेको गहिरो तर धीमा गतिको नालीको छेउछाउ उम्रिएका थिए । यसरी हिँडेपछि ऊ फेरि फर्केर आइन ।
केही सातापछि लाब्रीमा एउटा कौतुहलपूर्ण प्रहसन भयो । घरको पछाडिपट्टि, मज्जाले बढारिएको आँगनको बीचमा एक रास सामान थुपारेर निकै ठूलो आगो बालियो । चौडा सिकुवामा, यो दृश्य देख्न सकिने ठाउँमा उभियो अर्मन्ड, र त्यस आगोमा हाल्ने सामग्री ल्याउँदै हाल्दै गर्न करिब आधा दर्जन निग्रोहरूलाई निर्देशित गरिरह्यो । विलोको काठले बनेको एउटा सुन्दर कोक्रो पनि यसै आगोमा हालियो । बच्चाका लागि किनिएका महँगा लुगा र अन्य सरमामान पहिल्यै हालिसकिएको थियो ।
यसमाथि रेशमका गाउन, कखमल र साटनका कपडा, छेउछाउका तुना, बुट्टा, टेपी, पन्जा आदि राखिएको थियो । यी सब कुरा राख्ने बाकस नै दुर्लभ प्रकारको थियो ।
फालिनेमध्यको अन्तिम वस्तु थियो चिठीको एउटा पोको — साना, निर्दोष अक्षरहरू जुन डिजाइरीले उनीहरूले प्रेम गर्दाताका उसलाई पठाएकी थिई । एउटा भने अझै बाँकी थियो ड्रवरमा, जुन उसले गएर निकाल्यो । तर यो डिजाइरीले लेखेको पत्र थिएन । यो उसकी आमाले उसका बालाई लेखेको कुनै पुरानो चिठीको अंश थियो । उसले उक्त चिठी पढ्यो । पत्रमा उसकी आमाले आफ्नो लोग्नेको अहुदी माया दिलाएकोमा भगावन्लाई धन्यवाद दिएकी रहछिन् । भनिएको थियो, “तर सबैभन्दा माथि, रातदिन म भगवान्लाई यस कुराका लागि धन्यवाद दिन्छु कि हाम्रो प्यारो छोरा अर्मन्डले आफूलाई माया गर्ने उसकी आमा दासत्वको कलङ्क बोकेको नश्लबाट आएकी थिइन् भन्ने कहिल्यै थाहा पाउने छैन ।”